Fatana mafana-rivotra mora vidy ho an'ny mpamatsy granular zezika voajanahary sy NPK mpamatsy ary orinasa | YiZheng
entona-menaka Fatana rivotra mafana dia miasa miaraka amin'ny masinina fanamainana foana eo amin'ny tsipika famokarana zezika.
Inona ny fatana mafana-rivotra?
ny Fatana rivotra mafana mampiasa ny solika handrehitra mivantana, hamorona fipoahana mafana amin'ny alàlan'ny fitsaboana fanadiovana avo lenta, ary mifandray mivantana amin'ny fitaovana hanaovana fanafanana sy fanamainana na fanendasana. Nanjary vokatra fanoloana loharanom-pahalalana herinaratra sy loharanom-pahalalana hafanana nentin-drazana tamin'ny indostria maro.
Inona no ampiasaina amin'ny fatana mafana-rivotra?
Ny fanjifana solika an'ny Fatana rivotra mafana dia manodidina ny antsasaky ny fampiasana etona na heaters ankolaka hafa. Noho izany, ny rivotra mafana fanadiovana avo lenta dia azo ampiasaina nefa tsy misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny vokatra maina.
Ny solika dia azo zaraina ho:
1 Solika matanjaka, toy ny arina sy coke.
② Solika misy rano, toy ny diesel, menaka mavesatra, solika miorina amin'ny alikaola
③ Solika gazy, toy ny entona arintany, gazy voajanahary ary entona ranoka.
Ny rivotra mafana novokarin'ny fifampikasohan-tsolika dia nifandray tamin'ny rivotra ivelany ary nifangaro tamin'ny maripana iray avy eo, ary avy eo niditra tao amin'ny masinina fanamainana, noho izany ny fifangaroan'ny rivotra mafana mifangaro miaraka amin'ireo granules amin'ny zezika mba hialana amin'ny hamandoana. Raha te hampiasa ny hafanana amin'ny fihetsiketsehana dia tokony hiara-miasa ny fitaovana fandoroana solika, toy ny: mpandoro arintany, mpandoro solika, mpamono entona sns.
Fitsipika momba ny asa amin'ny fatana rivotra mafana
Amin'ny dingan'ny fanamainana sy ny fizotry ny granulation lena, ny fatana mafana dia ilaina fitaovana mifandraika amin'izany, izay manome ny loharano ilaina amin'ny hafanana ho an'ny rafitra maina. Ny andian-fatana hafanana hafanana / solika dia manana ny toetran'ny mari-pana avo, ny tsindry ambany, ny fifehezana ny mari-pana marina ary ny fampiasana angovo hafanana avo. Ny rivotra mialoha ny fanafanana dia napetraka ao amin'ny rambon'ny fatana rivotra mafana lehibe hanatsarana ny fahombiazan'ny Fatana rivotra mafana. Ny velarantany fanafanana convective dia mandray taha ambony antonony kokoa amin'ny alàlan'ny kajy henjana mba hahazoana antoka ny famindrana hafanana feno ny fatana fatana sy ny fahombiazan'ny hafanana avoFatana rivotra mafana
Endri-javatra amin'ny fatana mafana-rivotra
Ny fitsapana ny Fatana rivotra mafana avy amin'ny mpanamboatra zezika mitambatra dia manaporofo fa ny velaran-tany fanafanana dia ampy lehibe ary ny habetsahan'ny fipoahana mafana dia ampy, izay mampihena be ny fahasamihafana eo amin'ny loha sy ny rambon'ny rambony. milina fanamainana varingarina tokana, mba hahafahana mifehy mora foana ny hamandoan'ny zezika mitambatra ao anatin'ny faritra voafaritra. Ny zava-misy dia nanaporofo fa ny fampiasana nyFatana rivotra mafana Tsy vitan'ny hoe mifehy ny hamandoan'ny granules aorian'ny fanamainana, fa koa mamaha ny olana goavana amin'ny fampitomboana ny zezika, ary miaraka amin'izay dia mampihena ny fampiasana ny «anti-caking» mba hampihenana ny vidin'ny famokarana.
Fampisehoana horonantsary amin'ny rivotra mafana
Selection modely amin'ny rivotra mafana-rivotra
Fahombiazan'ny hafanana （%）
Fanjifana arintany (kg / h)
Fanjifana herinaratra （kw / h）
Volan'ny famatsian-drivotra (m3 / h)
Teo aloha: Masinina mifono zezika rotary
Manaraka: Fampiroboroboana ny hafanana avo lenta amin'ny indostrialy